समाचार « Salleri Khabar
(Thursday 4th June 2020)
१९ पहाडी जिल्लामा सहसचिव र एसपी खटाउने सरकारको तयारी
१ जेष्ठ, काठमाडौं । सरकारले १९ वटा पहाडी जिल्लाको सिडिओमा सहसचिव र जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा एसपी खटाउने तयारी गरेको छ। धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा दरबन्दी स्तरोन्नती गर्न लागिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको
प्रकाशित मिति : 15 May, 2019
२५ रुपैयाँमा पेटभरी खाना !
१ जेष्ठ, काठमाडौं । २५ रुपैयाँमा खाना १ सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, सत्य हो । भैरहवामा एक व्यवसायीले २५ रुपैयाँमा पेटभरी खाना खुवाउन थालेका छन् । भैरहवाका व्यवसायी
उपराष्ट्रपतिको स्वागतका लागि बालबालिकालाई ४० डिग्री सेल्सियसमा एक घण्टा पैदल
१ जेष्ठ, काठमाडौं । कटहरियामा आयोजित जानकी जयन्ती समारोहमा सोमबार विद्यार्थीहरु पानी खोज्दै भौतारिरहेका थिए । करिब ४० डिग्री सेन्टिग्रेडको गर्मीमा हिँडेर आइपुगेका उनीहरु कार्यक्रमस्थलमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा आकुलब्याकुल देखिन्थे
करिब ३ कराेडका दुई गाडी गृह मन्त्रातयबाट गायब
गृहबाटै गायब भएको बा ६ च १० २५ नम्बरको प्राडो जिप भने कहाँ छ,
युवा विदेशमा पठाउन भाषा सिकाउँदै सुदूरपश्चिम सरकार
१ जेष्ठ, काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई बिदेसिनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले देशमै रोजगारी दिने योजना सञ्चालन गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिम सरकार भने विदेश पठाउन विभिन्न देशका भाषा सिकाउँदै छ । प्रदेशका नौवटै जिल्लाका
हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागी अब राप्रपाले मठमन्दिरमा व्यानर राख्ने
१ जेष्ठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले देशैभरका मठमन्दिरमा हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाका पक्षमा लेखिएका ब्यानर राख्ने भएको छ । हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना र राजासहितको लोकतन्त्रका मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर
किन दिए एनसेलका प्रबन्धक सञ्चालकले राजीनामा ? रहस्य अझै गोप्य
१ जेष्ठ, काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका प्रबन्ध सञ्चालक सुरेनजे अमरासेकराले राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा वैशाख २७ गते स्वीकृत भएको हो। एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियटाले उनलाई २०७४ असारमा
काठमाडौं क्लिन अप्रेशन, दुई दिनमा २ सय ७६ जना पक्राउ
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यौनजन्य क्रियाकलाप तथा खुल्लमखुल्ला रूपमा हुने यौन बार्गेनिङ रोक्न सुरु गरेको ‘काठमाडौं क्लिन’ अभियानअन्तर्गत दुई दिनमा २ सय ७६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
‘मिडियाको व्यापार भनेको आलु, प्याजको जस्तो होइन’ :मन्त्री बाँस्कोटा
१ जेष्ठ, काठमाडौं । सरकारले सञ्चार क्षेत्र (मिडिया)मा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। ‘मिडियाको व्यापार भनेको आलु, प्याजको जस्तो होइन’, हेटौंडामा मंगलबार डिजास्टर रिकभरी सेन्टर उद्घाटन कार्यक्रममा सञ्चार तथा
सुन किन्ने सोँचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको सुनचाँदीको बजार भाउ
आज चाँदी प्रतितोला सोही मूल्य ७ सय २४ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
कस्तो रहला आज बुधबारको माैसम ?
भोलि बिहीबार देशभरि नै सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशको पूर्व र मध्यभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
निस्सानको नाफामा ५७ प्रतिशतले गिरावट
साइकावाले भने, “ यस बर्ष जापान र चीनमा निस्सानको विक्री बढ्न थालेको छ तर अमेरिका र यूरोपमा ‘कठिन’ परिस्थिति रहेको छ ।”